volany. Tao anatin’ny volana maro ny fitakiana, saingy hatramin’izao mbola tsy nahazo ny volany avy amin’ny Fanjakana kanefa namoaka vola teo am-pela-tanany. Manodidina ny 50 miliara Ar eo moa no voalaza fa volan’ireo orinasa tsy voaloa. Efa nilaza ny Minisitry ny vola Rtoa Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison fa manam-bola ny Fanjakana, vao ny 38% amin’ny “engagement budgetaire 2021” no vita. Ny 08 novambra, nanao avo vava ny Minisitry ny asa vaventy Atoa Gerry Hatrefindrazana fa “manam-bola ny FR (Fond Routier), ny vola ao anaty kaontin’ny FR ao amin’ny tahirimbolam-panjakana dia 549 miliara Ar, ka 56 miliara Ar fotsiny amin’io, izay manome 10% ny amin’io fotsiny no tokony haloa amin’ireny orinasa ireny. Nisy ny fitiliana voatery tsy maintsy natao, ny antony, dia nanajanonana ny fandoavana dia lazaina mazava tsara fa tsy resaka ara-bola”, hoy izy. Tsy ampy ny fitiliana, nandeha ny “inspection”, rehefa natao ny fitiliana in-telo miantoana, nandeha ny fitsirihana, mbola nomena andraikitra nandeha ihany koa ny fitsirihan’ny governora hanaraha-maso ny asa tamin’ny FR, araka ny fanazavana tamin’izany. Nambara fa hisy komity hatsangana ny faran’io herinandro nitenenany io, hidina any an-toerana miaraka amin’ny orinasa, horesahina hoe: mbola vonona hamita ny asa ve? Rehefa mahafa-po araka ny ny nifanarahana izay vao aloa ny vola, raha ny fanazavana. Ireo 10 ve izany no nahafeno ny fepetra sy nahafa-po ny asany ? Hatramin’izao dia mitoetra hatrany ilay fomba famaly mahazatra ny mpitondra hoe: « efa mandeha ny fanadihadiana » ho an’ny asan’ireo sasany ?